qaybaha dumarka | Gaaloos.com
Home » galmada » qaybaha dumarka
Sharaxida noocyada ragga iyo dumarka ayaa waxa ay salka ku haysaa sida qofka loo arko. Qofba dabeecadiisa iyo la dhaqankiisa dadka ayaa lugu sifeeyaa. Xiriirka ka dhaxeeya laba wada socda, is raba ama wada degan ayaa waxa uu qof waliba u arkaa ka kale si gaar ah. Guud ahaan dadka debada ka joogaa xiriirka laba ka dhexeeyaana si gooni ah ayay u arkaan lamaanahaas. Gaar ahaana Ladaneey ayaa waxa ay idiin haysaa noocyada lagu tilmaamo dumarka iyo ragga.
Waa gabadha ku fiican dhaqaalaha, ee aan ku takri falin xoolaha reerka. Tani waa barwaaqo ninka helaa uu nasiib saday. Doqonkuse ma kaasbado
Title: qaybaha dumarka